कोरोना पुष्टि भएको दिन लामो सुस्केरा लिएको थिएँ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कोरोना पुष्टि भएको दिन लामो सुस्केरा लिएको थिएँ
चैत्र २२, २०७६ डा. शेरबहादुर पुन
'नमस्ते डा'साब !'
भर्खरै बिरामी हेरेर केही सेकेन्डको खाली समयमा थिएँ। मेरो एकाग्रतालाई भंग गर्ने गरी सोध्ने ती व्यक्तिलाई मैले सहजै पहिचान गर्न सकिनँ। अलिकति अलमलिएँ।
नअलमलिनु पनि कसरी, कैयौं बिरामीको आवतजावत भइरहन्छ। त्यसमा पनि उनले टोपी लगाएका थिए, जसले गर्दा आधा अनुहार मात्र देखिएको थियो।
म अलि अलमलमा परेको देखेर होला उनैले आफ्नो परिचय दिँदै भने, 'डा'साब म कोरोनाको उपचार गरेर गएको थिए नि!'
बल्ल मलाई याद आयो। उनी नै पहिलो र हालसम्म पूर्ण रुपमा ठीक भएर गएका कोरोना संक्रमित बिरामी थिए। उनी नेपालको पहिलो कोरोना विजयी थिए। कोरोना संक्रमण हुँदैमा सबै मरिहाल्दैनन् है भन्ने बलियो उदाहरण पनि। नेपालको लागि मात्र होइन विश्वको लागि सकारात्मक सन्देशको संवाहक थिए उनी।
मलाई अर्को कुराको पनि सम्झना आयो। जुन मसँगै सम्बन्धित छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक नेपालमा कोरोना देखिएको घोषणा गर्दैगर्दा मैले लामो सुस्केरा लिएको थिएँ। त्यो प्राकृतिक थियो। लामो सुस्केराभित्र केही त्रास तर बढी चाख र जिज्ञासा/खुल्दुली थियो। त्यो बेला छिमेकी देश चीनमा यही भाइरसले हजारौंको ज्यान लिँदै गरेको समाचार भुसको आगोसरि विश्वभर फैलँदै थियो। यस्तो अस्वाभाविक सुस्केरा निकाल्नु पनि स्वाभाविक नै थियो। किनभने यो भाइरसको जन्म हुँदादेखि नै मैले नजिकबाट यसलाई नियालिरहेको थिएँ। हाल पनि पछ्याइरहेको छु।
तर नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रकोप देखिनुपूर्व 'काल्पनिक कोरोना' भाइरसको त्रासले समाजमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो। सजग र सतर्क हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो तर विदेशका घटनाक्रम हेरेर आफू पनि त्यही अवस्थामा छु कि भनेर सोच्नाले मनोवैज्ञानिक तनाव र त्रास बढाएको छ। यसले रोगसँग लड्ने मनोबललाई गिराउँछ। कोही विदेशबाट आउनेबित्तिकै उसले सबै टोल/गाउँ नै सखाप पार्छ भन्ने सोचले व्यापकता पाएको देखिन्छ। यसले एक-अर्कामा अविश्वासको खाडल बनाएको वा बनाउँदै गएको देखिन्छ।
विदेशबाट आएकाहरुले पनि इमानदारपूर्वक १४ दिने क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्छ। यसको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती भएको देखिन्छ। विशेषगरी पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट अत्यधिक मानिसको लर्को लागेको र उनीहरुलाई राख्ने ठाउँको अपुग भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। उनीहरुको सम्पर्क कोसँग, कहिले र कसरी भयो/हुँदै छ भनेर हेर्ने जनशक्तिको समेत अभाव हुँदा भोलि ठूलो दुर्घटना ननिम्तेला भन्न सकिँदैन।
नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमित भन्छन्- 'नडराउनुस्, बिस्तारै निको भइन्छ'
हाल कोभिड-१९ ले पूर्व (चीन) बाट सिधै पश्चिममा पुगेर धेरैको ज्यान लिइरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा यो भाइरसले पूर्वबाट अपवाद संख्या छाडेर एकैपटक पश्चिमका देशमा ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याइरहेको छ। यस भाइरसको बारेमा विदेशी भाषामा लेखिएको पहिलो लेखमध्ये मेरो नेपालीमा प्रकाशित लेख पनि पर्छ। मध्यरातमा सो लेख लेख्दै गर्दा आजको मितिसम्म यस्तो भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर कल्पनासमेत गरेको थिइनँ। सिंगापुर, हङकङ, कोरियाजस्ता देशले कोरोना संक्रमित देखिनासाथ नियन्त्रणका उपाय कडा रुपमा अपनाउँदा व्यापक फैलावटबाट रोकेको देखिन्छ। यद्यपि संक्रमितको संख्यामा भने आगामी दिनमा केही घटबढ हुन सक्नेछ। तर यी देशमा एकैदिनमा सयौंको संख्यामा कोरोना भाइरसको कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको समाचार सुन्नुपरेको छैन।
नेपालमा पनि आयातित केसहरु बढ्दै गइरहेको अवस्थामा समुदायमा नजाओस् भन्नका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। 'सोसल डिस्ट्यान्स' कोरोना भाइरसको प्रसारण रोक्नमा सबैभन्दा प्रभावकारी विधि मानिन्छ। हालको लकडाउनले सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। यद्यपि यसको पालनामा भने अझै कडाइ गर्न जरुरी छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) कोरोना शंकास्पद वा संक्रमितको उपचार गर्दा सबैभन्दा आवश्यक सामग्री हो। यसको प्रयोगबिना काम गर्दा स्वास्थ्यकर्मी आफैं संक्रमित हुनसक्ने र थप अरुलाई संक्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। हुन त पीपीई संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले मात्र लगाए पनि पुग्ने हो। तर जुन अस्पतालमा फिबर क्लिनिक चलाइएको छ, त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पीपीईको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक लेखहरुले लक्षणविहीन संक्रमितबाट पनि अरुलाई कोरोना सर्न सक्छ भनेर देखाएको छ। नेपालमा हालसम्मका कोरोना संक्रमितमा लक्षण कडा भएको देखिएको छैन वा लक्षणविहीन अवस्थामा भेटिएका छन्। यो अवस्था नै हाम्रा लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हाम्रो प्रोटोकलमा विदेशबाट आए पनि लक्षण नदेखिए प्रयोगशाला परीक्षण गर्नु पर्दैन भन्ने छ। यदि विदेशबाट आएको व्यक्ति संक्रमित रहेछ र क्वारेन्टाइनमा बसेको रहेनछ भने सो व्यक्तिले अरुलाई सार्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कडा अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने ती सबै व्यक्तिको नमुना ( लक्षण भए पनि नभए पनि) संकलन गरी जाँच गर्नुपर्छ। यसले सुरुवाती समयमा संक्रमण पत्ता लाग्नेछ र उपचारमा सहजता ल्याउनेछ।
हालै नेपालमा पहिलोपटक स्थानीयस्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यो नै ठूलो दुर्घटना नभए पनि हामीले अझै हेलचेक्रयाइँ गर्दै गए अप्रिय घटना हुन सक्नेतर्फ भने यसले संकेत गरेको देखिन्छ। अब स्थानीयस्तरमा कोरोना देखिएको ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो 'कन्टयाक ट्रेसिङ' गरेर सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो समुदाय स्तरमा पुग्नु अगावै द्रुत गतिमा गरिसक्नुपर्नेछ।
अब जोखिमको स्तर ह्वात्तै बढेकाले हामीले नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। कोरोनाको संक्रमण फैलिएको पनि तीन महिना पुगिसकेको छ। यस अवधिमा नेपालले युरोप तथा अमेरिका जस्तो नियति भोग्नुपरेको त छैन तर आगामी दिनमा त्यस्तै नियति भोग्नु नपरोस् भन्नाको लागि हाल देखिएको कमीकमजोरीलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ। यो विषम घडीमा हामी सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौं र एकजुट भई कोरोनाविरुद्ध लडौं।
(लेखक शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुन्।)
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०६:५८
भारतद्वारा परीक्षण किट्स निर्यातमा पनि रोक, नेपालमा प्रभाव
चैत्र २३, २०७६ सुरेशराज न्यौपाने
नयाँ दिल्ली — भारतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएपछि बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने डायग्नोस्टिक किट्सको निर्यातमा समेत रोक लगाएको छ । जबकि करिब दुई साताअघि नै भारत सरकारले अत्यावश्यक भेन्टिलेटर र स्यानिटाइजरको निर्यातमा पनि रोक लगाइसकेको छ ।
निर्यातमा रोक लगाइएको परीक्षण किट्स विशेषगरी बिरामीमा देखिएको संक्रमणको पहिचान गर्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै त्यस्तो रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
‘परीक्षण किटहरू (परीक्षण वा प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने कुनै पनि पदार्थ) को निर्यातमा तत्काल रोक लगाइएको छ,’ महानिर्देशनालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
पछिल्लो निर्णयसँगै भारतबाट हुने परीक्षण किटको निकासीमा रोक लागेको छ । भारतले लगाएको यो रोकले नेपालमा कोभिड–१९ भाइरसलगायत अन्य रोगको परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको अभाव हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रयोग हुने डायग्नोस्टिक किट्स बढीजसो जापान, जर्मनी, चीनलगायत मुलुकमा बन्ने गरे पनि तिनको क्षेत्रीय विक्रेता भारतमै केन्द्रित रहेकाले रोक लगाउने पछिल्लो निर्णयले नेपालमा त्यस्ता किट्सको अभाव हन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि भारत सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त निश्चित व्यवसायी वा कम्पनीले भने सामग्री निर्यात गर्न पाउनेछन् ।
भारत सरकारले भेन्टिलेटर र स्यानिटाइजरको निर्यातमा त दुई साताअघि नै बन्देज लगाइसकेको छ । महानिर्देशनालयले नै गत २४ मार्चमा यी सामग्रीको निकासीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारतमा कोरोना महाव्याधीको प्रकोपसँगै यी अत्यावश्यक सामग्रीको माग बढ्दै गएपछि निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको हो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरूले समेत देशभित्रै यी सामग्रीहरूको अभाव भएको हुँदा तत्काल निर्यातमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । भारतको निर्णयले नेपालका लागि हुने निर्यातलाई प्रभाव नपार्ने दिल्लीस्थित दूतावासका अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०६:५५
नेकपाको आगोमा कसले थप्दै छ घिउ ?
कवि–नाटककार युगको मञ्चमा
भीरको चिण्डो, उँधो न उँभो
निमोनिया भ्याक्सिन : कोभिड–१९ महामारीमा ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्ला ?